Mayelana Nathi, Intambo ye-Embroidery Thread, i-Polyester Sewing Thread Factory
I-NINGBO MH I-THREAD INDUSTRY GROUP, igxile ekuthungeni intambo kunye nemveliso yokudayiswa kwemicu ye-12 iminyaka. Ngoku i-MH ineendawo ezintathu zoshishino kunye ne-120,000m2 indawo yezityalo, abasebenzi be-1900, kunye ne-equippte kunye noomatshini obuphezulu kunye nolawulo olucokisekileyo lwemveliso, sinokunikezela abathengi ngekhwalithi ephezulu kunye nokuthembeka.
Inkqubo yokuvelisa i-MH ye-MH ye-Threading yinkqubo kubandakanywa: ukuthambisa intambo, ukutsala, ukuhamba, ukupakisha nokuvavanya. Umthamo wonyaka wokuvelisa i-30000 + itoni. Imveliso yethu kuquka iipolyester ezihlazileyo kunye ne-corespun ezidibeneyo kwi-nylon kunye ne-polyester ene-braids, ezifumaneka ngobukhulu obuhlukeneyo kunye neenkcukacha zokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabathengi. Uluhlu lwe-MH lokuthunga olunikezelwa kubavelisi behlabathi bembatho, iibhedi, i-carpet, iifashini zasemakhaya, iifashishini, ukupakishwa kunye nezinye iimveliso eziqingqiweyo emhlabeni wonke, ziyakwamkelwa ngokubanzi ngabathengi behlabathi jikelele abanomgangatho ophezulu kumgangatho wokhuphiswano.
Icandelo lokuThuthuza uMboniso:
I-MH ye-Embroidery Thread Industry ine-epheleleyo yomgca wokuvelisa, ukutsala, ukubunjwa kunye nokubunjwa, okuqinisekisa ukuveliswa ngexesha elifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu wokuvelisa intambo ye-rayon kunye ne-polyester eboyiweyo, umthamo wethu wonyaka wokuvelisa yi-10000 + itoni. Ukuphakama okukhulu, amanyathelo amanyeneyo, umbala omhle, isisombululo esincinci kunye nokukhawuleza kombala yilokho esikubonelela kubathengi.
Icandelo le-MH yoSukulo lokuSebenza kunye ne-MH ye-Embroidery Thread Industry iye yafumana isatifikethi se-ISO9001 kunye ne-OEKO-TEX, siyakhusela ukukhuselwa kwendalo, nonyaka ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye ne-teknoloji ekuphuhliseni, ukwenza usebenziso oluchanekileyo lwezinto ezibonakalayo, amandla kunye namanzi.